Nisy olona efa nanandrana ny Apple Watch ary milaza aminay amin'ny antsipirihany | Vaovao IPhone
Araka ny nolazain'izy ireo tamin'ireto tranga ireto rehefa miresaka momba ny andian-tsarimihetsika na sarimihetsika: "Attention, spoiler." Raha te-ho tonga amin'ny Keynote ianao amin'ny alatsinainy hahalalana amin'ny antsipiriany momba ny Apple Watch, ny fampiharana sy ny endriny amin'ny lalina, tsara kokoa ny tsy hamaky bebe kokoa. Raha tsy mahazaka ary te hahafantatra antsipiriany bebe kokoa momba ny fanombohana lehibe amin'ity lohataona ity ianao, avy eo tohizo ny famakiam-boky satria aorian'ilay fitsambikinana dia lazainay aminao hoe inona ireo loharano afaka niditra tao amin'ny Apple Watch namoaka.
Mazava ho azy fa avy amin'ny 9to5Mac ny fampahalalana, izay manampahaizana manokana amin'ny "fanimbana ny fety" ho an'i Apple amin'ny filazalazana amin'ny antsipiriany ny famoahana vaovao alohan'ny hanaovan'ireo any Cupertino amin'ny fomba ofisialy. Azonao atao ny mahazo fampahalalana miavaka amin'ireo izay tsara vintana afaka niditra Apple Watch hanandramana azy, ary lazain'izy ireo amintsika ny antsipiriany na vinavina tsy fantatra hatramin'izao.
1 Fiainana batterie
2 Fomba fihinana ambany
3 Fanaraha-maso ny tahan'ny fo
4 Endri-javatra Glance misimisy kokoa
5 Fitehirizana mozika
6 Fampiharana Apple Watch
7 Force Touch, satro-boninahitra ary fehezin'ny feo
8 Fehizoro, haingam-pandeha ary fanatanjahan-tena
9 Fanakatonana sy fanakatonana ny fampiharana tsy maintsy atao
Tsy isalasalana fa ny olana mampiady hevitra indrindra amin'ny Apple Watch, sy ny smartwatches rehetra (afa-tsy ny Pebble). Haharitra iray andro ve? Ho voaloa isaky ny alina ve izany? Ho lany famantaranandro ve aho aorian'ny fampiasana mafy mandritra ny adiny roa? Toa izany Apple dia nahavita nanatsara ny fahombiazan'ny batterin'ny famantaranandrony, ary na dia tsy misy fahagagana aza, farafaharatsiny amin'ity faritra ity, dia nahavita nanitatra ny fiainana antonony an'ny Apple Watch.
Raha teo am-piandohana izy ireo dia niresaka fampiasan-kery 2 hatramin'ny 4 ora, dia toa nahavita izany izy ireo salan'isa 5 amin'ny fampiasana mahery ny fampiharana sy ny sensor. Amin'ny fampiasana ara-dalàna (fampiharana indraindray, sensor mandeha, sns.) Dia tsy tokony hisy olana ny Apple Watch haharitra tontolo andro, fa tsy maintsy ampangainaina isan-kariva izy satria tsy haharitra tontolo andro iray hafa.
Fomba fihinana ambany
Apple dia manainga ny tanany araka ny nolazainay anao ny andro lasa izay. Fomba fanjifana ambany izay ahafahanao manitatra bebe kokoa ny bateria mametra ny fifandraisana amin'ny famantaranandro, izay ho lasa fangatahan'ny mpampiasa, mampihena be ny famirapiratry ny efijery ary mampatory ny efijery aorian'ny roa segondra nefa tsy mampiasa famataranandro.
Ny fampihetsehana ny maody ambany herinaratra dia ho tena tsotra. Ao amin'ny efijery bateria, izay azo alefa amin'ny fampiasana ny "Glance" (fahitana) an'ny Apple Watch, dia azontsika atao ny mampihetsika azy amin'ny fotoana rehetra, na dia 100% aza ny bateria. Ity efijery ity dia hampiseho ny toeran'ny bateria misy loko maintso, volomboasary (ambany 20%) ary mena (ambanin'ny 10%).
Ary ahoana ny fiatraikany amin'ny bateria iPhone? Ireo izay afaka nanamarina izany dia manome toky fa Tsy dia nahatsikaritra fahasamihafana izy ireo raha oharina amin'ny fampiasana mahazatra tsy misy Apple Watch. Vaovao lehibe fa na dia tsy maharitra aza ny famantaranandro, dia tsy misotro ny baterian'ny iPhone-ntsika ka mahatonga antsika tsy hanana finday na famantaranandro amin'ny afovoan'ny tolakandro.
Fanaraha-maso ny tahan'ny fo
Ny fiasa Glance dia hahafahantsika mahita ny fitepon'ny fontsika indray mipy maso. Ireo nanandrana dia manome toky fa miseho eo noho eo ilay fampahalalana ary tena marina ihany koa. Ny sary aseho dia tena mitovy amin'ilay sary etsy ambony. Mazava ho azy fa hafindra amin'ny fampiharana ara-pahasalamana an'ny iPhone ity fampahalalana ity.
Endri-javatra Glance misimisy kokoa
Ho fanampin'ireo fiasa Glance voalaza etsy ambony ho an'ny bateria sy ny tahan'ny fo, misy ireo hafa izay apetraka amin'ny toerana mahazatra: Fitness, hetsika, famantaranandro, toetrandro, mozika, fanovana haingana, kalandrie ary sarintany. Ireo dia fampisehoana haingana ahafahantsika miditra nefa tsy mila mivezivezy amin'ny menus na mandefa rindranasa hafa.
Ankoatr'ireo fiasa ireo dia afaka miditra haingana ao amin'ny Notification Center, izay ho feno, toy ny amin'ny iOS sy OS X. Ny ivon-toerana fampandrenesana dia haseho amin'ny fomba mitovy amin'ny an'ny iOS, manaparitaka ny rantsan-tananao manerana ny efijery avy eo ambony.
Ho avy ny Apple Watch fahafaha-mitahiry 8GB, tsy azo itarina. Ho fanampin'ireo rindranasa hapetrakay, ireo 8GB ireo dia hampiasaina hitahiry mozika izay hafindrantsika avy amin'ny iPhone amin'ny alàlan'ny fampiharana iOS. Azontsika atao ny mitendry ny mozika amin'ny fitaovana ivelany misy fifandraisana Bluetooth, toy ny mpandahateny na headphone.
Ny fampiharana Apple Watch izay ho avy napetraka eo amin'ny iPhone miaraka amin'ny iOS 8.2 Izy io dia hanampy antsika hamindra mozika avy amin'ny iPhone, handamina ny kisary amin'ny Apple Watch ary hamafa azy ireo mihitsy aza. Izy io koa dia azo atao amin'ny Apple Watch mihitsy, amin'ny fomba mitovy amin'ny iOS. Azontsika atao ny manala ireo rindranasa avy amin'ny Apple Watch nefa tsy mila esorintsika ilay fampiharana mifandraika amin'ny iPhone.
Force Touch, satro-boninahitra ary fehezin'ny feo
Ny efijery Apple Watch dia tsy mamantatra fotsiny ny tsindry bokotra, fa ny fanerena omena azy ireo. Ireo izay nampiasa azy dia nilaza fa lasa zatra mifehy ny famantaranandro ianao satria voajanahary tokoa. Azonao atao ny manindry sy mikorisa ambony, ambany, havanana na havia, fa tsy misy "pinch to zoom" satria vita amin'ny fampiasana ny satro-boninahitra eo amin'ny sisiny.
Ilaina koa ny fifehezana ny feo amin'ny fampiasana Apple Watch. Azonao atao ny mamaly hafatra sy mandefa sora-peo, fa tsy afaka (amin'izao fotoana izao) hamaly ny mailaka mampiasa io safidy io ianao, tsy maintsy mandeha any amin'ny iPhone-nao ianao raha hanao izany.
Fehizoro, haingam-pandeha ary fanatanjahan-tena
Takatra amin'ny efijery amin'ny finday, izy ireo dia miantoka fa izany no izy "Ny efijery tsara indrindra nanandraman'izy ireo tamin'ny smartwatch". Mamiratra ny loko ary mainty be ny mainty. Mikasika ny hafainganan'ny rafitra dia lazain'izy ireo fa tena tsara izy io, na dia marina aza fa raha mametraka 200 eo ho eo ny famataran'ora amin'ny famataran'asa dia somary miadana (rindranasa 200?)
Mikasika ny fehin-kibo fanatanjahan-tena izay miavaka amin'ny maodely ara-panatanjahantena dia manome toky izy ireo fa tsara kalitao izany fomba fanidiana sarotra zatra noho ilay pin izay ampidiriny ary tsy mora ny mametraka azy amin'ny tanana iray.
Fanakatonana sy fanakatonana ny fampiharana tsy maintsy atao
Mba hamonoana ny Apple Watch dia mila manao izany ianao tsindrio ny bokotra eo amin'ny ilany ankavanana, ambanin'ny satro-boninahitra. Aorian'ny fihazonana azy dia hiseho ny bokotra iray izay tsy maintsy soloantsika toy ny amin'ny iOS hamonoana ny Apple Watch. Toy izany koa, azontsika atao ny manery ny fanidiana ny fampiharana izay nanjary tsy marin-toerana: tazomintsika ny bokotra ary rehefa miseho ny efijery fanidiana, dia tsindrio indray ny bokotra hanidiana ny fampiharana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Nisy olona efa nanandrana ny Apple Watch ary milaza amintsika amin'ny antsipiriany
Toy izao no hiantsoan'ny feo WhatsApp amin'ny iPhone
Ny fahasamihafana eo amin'ny efijery an'ny Apple Watch sy ny Sport Sport